C/laahi Sheikh Xasan”Waxaa la Dilaa Xildhibaanada ka soo horjeda M/weynaha iyo R/wasaaraha” | KEYDMEDIA ONLINE
C/laahi Sheikh Xasan”Waxaa la Dilaa Xildhibaanada ka soo horjeda M/weynaha iyo R/wasaaraha”
Muqdisho(KON)-C/laahi Sheikh Xasan oo siku tilmaama Siyaasiinta Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay Dilalka iyo Beegsiga lagu haayo Xildhibaanada Soomaaliya waxuuna Farta ku fiiqay in ay ka dambeeyaan M/weynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya.
C/laahi Sheikh Xasan ayaa sheegay in 5-tii Xildhibaan ee Sanadkaan lagu Dilay Magaalada Muqdisho ay yihiin kuwii ka soo horjeeday Siyaasada Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya islamarkaana uu aaminsan yahay in loo dilay Dano Siyaasadeed.
Siyaasiga ayaa Xusay in Dilalkii ugu danbeeyey ee Xildhibaan Sh Aadan Maddeer iyo Saado Cali warsame loo dilay Dano Siyaasadeed waxayna dilka la beegsadaan Shaqsiyaadka u DANQADA oo u DOODA Bulsha Soomaaliyeed. islamarkaana ma jirito Cid baaritaan ku sameeysay ama soo qabata.
“Xildhibaanada Taageersan Xasan Sheikh Maxamuud maa la dilo,maxaa kuwa ka soo horjeeda loo u gaarsanaya,hadii aysan Siyaasadeeysneeyn”ayuu yir C/laahi Sh.
Marka laga sootago Eedeeynta Siyaasiinta ee ah in Xildhibanada la Dilay ay Siyaasad ka danbeeyso ayaan waxaan jirin in aanan Baaritaano lagu Sameeyn Dilalka Xildhibaanada oo intooda badan Dharaar Cad ka dhacay Magaalada Muqdisho,waana taas mida Bulshada Soomaaliyeed Tuhunki galisay.
Degaanka waxuu ahaa mid mudo dheer ah ka dhacayaan weeraro ay Al-Shabaab kusoo qaadeysay.